Gbasara Anyị | Hangzhou Huanyu Textile Co., Ltd.
Lekwasị anya n'ichepụta akwa
Miri n'ime akwa akwa akwa ngwaahịa na ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya
Hangzhou Huanyu Textile Co., Ltd. nwere ihe karịrị 20 Afọ nọgidere na-enwe na-akpa ákwà ụlọ ọrụ. Anyị na-amalite site na obere ụlọ ọrụ na-esiji ákwà na-amalite na ndị ọrụ 15. Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, anyị nwere ugbu a anyị dyeing factory na nwekwara gụchara factory na ihe karịrị 200 ndị ọrụ. Na ike ibuputa akwa nke akwa na - abawanye ruo mita 200,000 kwa ụbọchị.
Ngwunye anyị na-eweta ndị ahịa ụlọ na ndị na-azụ ahịa mba ụwa. Nabata ndị ọ bụla na-azụ ahịa na-enye anyị ajụjụ ndị a. Ma Nabata ndị ọ bụla zụrụ ma gaa na ụlọ ọrụ anyị.
Anyị na-enye usoro ntụkwasị obi na ngwa ngwa ngwa ahịa maka ndị na-azụ mba. Kindsdị akwa ụdị anyị na-arụ bụ akwa polyester taffeta, polyester pongee fabric, polyester twill lining fabric, polyester oxford fabric, polyester taslon fabric na na. The ákwà gụsịrị anyị nwere ike ịnye gụnyere wepụ, PA / Pu / Silver mkpuchi, ịkwanyere calendering na lamination.
Ọkachamara Agba Kachasị Agba
Anyị na-enye ndị na-agba agba agba ọkachamara na ndị na-azụ anyị maka ịhọrọ mfe agba ha. Anyị nwekwara ụlọ nyocha ụlọ nyocha anyị, na-enye ọrụ nyocha ụlọ nyocha maka ndị zitere anyị nlele ma ọ bụ koodu pantone.